bilaogy Juan Herranz ›Boky sy sarimihetsika ho an'ny rehetra
hanitatra ny menio ho an'ny zaza
Tantara vaovao ankehitriny
Tantara foronina mainty
Tantara momba ny mistery
Adventures amin'ny Novel
Tantara foronina mahatsiravina
Tantara momba ny Costumbrist
Tantara momba ny ady
Tantara foronina mahafinaritra
Tantara foronina amin'ny siansa
Tantara foronina taloha
Tantara foronina ho an'ny tanora
Tsy angano fotsiny
boky manampy ny tenany
juanherranz.com, bilaogy literatiora tsara indrindra 2021
Tsy resaka fampiroboroboana tena ihany koa izany. Saingy tsy afaka najanoko ny fandefasana azy. Ny bilaogiko izao no bilaogy literatiora tsara indrindra 2021 araka ny fifaninanana 20blogs an'ny gazety 20 minitra. Araka ny nasehon'ny fikambanana azy indrindra, izy no loka indrindra ho an'ny ...
Rtoa March, nataon'i Cristina Feito
Rehefa ampitahaina amin'i Patricia Highsmith ny mpanoratra vaovao toa an'i Cristina Feito, dia mihantona toy ny sabatry ny Damocles ny andraikitra miandry ny fanakianana ankapobeny ataon'ny mpamaky mba hiafara amin'ny fanamelohana ilay raharaha. Ny fanamafisana ny fampitahana marina, araka ny tondroin'ny hevitra rehefa miparitaka ity asa ity, dia heverina fa ...
Nostalgia for the Amphibian Woman, nataon'i Cristina Sánchez Andrare
Araka ny nolazain'i Sabina, "tsy misy nostalgia ratsy kokoa noho ny faniriana izay tsy mbola nisy na oviana na oviana." Eo ambanin'ny ridaon'ny zava-misy, ny angano dia mamorona an'io karazana epic nostalgique io izay mampitombo ny zava-misy na mahatonga azy ireo ho mahalana. Any amin'ny farany dia ny compendium amin'ny lafiny roa amin'ny zava-misy. Ny literatiora Christina...
Boky Walter Tevis 3 tsara indrindra
Ny sehatra toa an'i Netflix dia ireo mpanjaka Midas vaovao, afaka mamadika ny tantara an-tsary lavitra na asehon'ireo mpanoratra vaovao mandroso toa an'i Elisabet Benavent ho volamena. Ary ny zava-misy dia efa be dia be ny script amin'ny literatiora, ka maninona no mandany amin'ny famoronana sy mpanoratra, raha misy olona miandraikitra ny ...
Top 3 Romana Polanski Movies
Ny raharaha Roman Polanski dia hanamarina ny hevitra hoe manintona ny bao. Satria ny fahaizan'ity talen'ny sarimihetsika ity dia azo ampitahaina amin'ny lafiny maizina indrindra, miaraka amin'ny karazana fahaverezana izay mifikitra amin'ny anjarany ary miainga avy amin'ny fahasamihafan'ny tranga mety hitranga na...
Boky 3 tsara indrindra an'i David Orange
Taorian'ny Javier Castillo, ilay mpanoratra Valenciana David Orange dia manondro ny mpivarotra vaovao tsara indrindra amin'ny karazana mampiahiahy ankehitriny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ilay mampientam-po izay manjaka amin'ny zava-drehetra ny gadona ary ny famakian-teny dia tonga amin'ny teboka tsy miverina amin'ny pejy 1 mihitsy. Angamba resaka…
Boky tsara indrindra 3 nataon'i Elizabeth Strout
Ny trangan'i Elizabeth Strout dia toa manatona ny paradigma amin'ny varotra hita miaraka amin'ny evolisiona tena ilaina. Ireo tantara madinidinika izay nanombohan’ny maro amintsika, ireo tantara ireo dia nifanaraka tamin’ny fotoana tsirairay tamin’ny fahazazana na ny fahatanorana... Amin’ny lafiny iray, ny fahafinaretan’ireo izay nanomboka nanoratra,...
Top 3 Peter Weir Movies
Ho fanomezam-boninahitra ny talen'ny Aostraliana Peter Weir dia mahita sarimihetsika lehibe vitsivitsy izay indrisy fa nafafy tamin'ny fomba tena ara-potoana. Ny tsy firaharahiana ny antony tsy nahatonga an'i Weir handray fitarihana bebe kokoa amin'ny famokarana miaraka amin'ny marika manokana nahazo ny Oscar imbetsaka. Mety ho iray…
Ny boky tsara indrindra an'i Rafael Tarradas Bultó
Ny fahatongavan'i Rafael Tarradas amin'ny literatiora dia fifanoherana mahaliana amin'ny marika, raha tsy stigma, amin'ny fitantarana ny tantaram-pianakaviana mifandray amin'ny penina vehivavy. Misokatra amin'ny ankoatr'i María Dueñas na Anne Jacobs ny fomba fijery, mba hitanisana mpanoratra roa misongadina ao anatin'ity…
pejy1 pejy2 ... pejy321 manaraka →
Nanomboka tamin'ny 2005 © Juan Herranz 2022
fahadisoana: Tsy misy kopia
Mampiasa cookies ity tranokala ity hanatsarana sy hanamafisana ny traikefanao. Fanazavana fanampiny ao amin'ny ny politikantsika cookie.